Train Travel Ihe ụgbọelu Travel - Olee nke Best? | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Train Travel Ihe ụgbọelu Travel - Olee nke Best?
E nwere ọtụtụ ụdịdị nke iga dị taa maka njem na Europe, ma ụgbọ okporo ígwè njem vesos ụgbọelu njem bụ ihe ndị kasị akpali otu.
Otú ọ dị, nke mode nke iga bụ kacha mma? na Save A Train, anyị na-N'ezie abụchaghị eziokwu na-eche na ụgbọ okporo ígwè eme njem bụ nnọọ elu ụdị njem! Gụọ n'okpuru iji chọpụta ihe ka mma ka anyị dive n'ime post anyị na njem ụgbọ oloko na njem ụgbọ elu.
eco- enyi na enyi
Air travel is now recognized as the fastest-growing contributor to global warming. Izere ụgbọ elu mgbe e nwere mfe uzo ozo ka njem bụ ikekwe nnukwu otu ihe ọ bụla n'otu n'otu nwere ike ime bee ha carbon akara ukwu. Ikuku ndu na-ebelata n'ike n'ike site na ụgbọ okporo ígwè na ụgbọelu. Ọtụtụ mba Europe, ụgbọ okporo ígwè netwọk buru ibu na ọrụ na-Ugboro, otú i nwere ike na- ejegharị ejegharị eco-enyi na enyi enweghị ihe ọ bụla àjà.
Foggia ka Bari Ụgbọ oloko
Florence na Bari Ụgbọ oloko
Naples na Bari Ụgbọ oloko
Rome ka Bari Ụgbọ oloko
Ejegharị ụgbọelu a pụtara na ị ga-nọrọ ná nchebe gị oche izu, ma ọ bụ ọbụna ọnwa, tupu ka na-a ezi uche ụgbọ.
Ozugbo ị nwetara oche gị, ọ dịghị mfe ịgbanwe gị flights na-enweghị na-akwụ nnukwu ego.
Ezie na ụfọdụ ụgbọ oloko achọ ka eme oche abụọ tupu, e nwere ọtụtụ ihe mgbanwe, karịsịa ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe oge na ị chọrọ njem.
Ugbu a na Save A Train ọbụna ma ọ bụrụ na gị tiketi si price tụlee, ha ga-ekwe ka ị maara na-enyere gị aka ịgbanwe gị tiketi na a dị ọnụ ala karịa price!
Kere na-ewere a njem na ọ bụghị inwe na-abata awa abụọ n'oge, echere a ogologo nche akara, ọtùtù gị mmiri na gels, ma ọ bụ gbapụ akpụkpọ ụkwụ gị maka nnyocha. Mmadụ Bịa ka ụwa nke ụgbọ okporo ígwè njem. Mgbe ị na-eme njem site na ikuku, oge na nchebe anya na-mkpa. Ejegharị ejegharị site okporo ígwè a pụtara na ị pụrụ na-abata 30 nkeji tupu oge na-eje ije ogologo gị n'elu ikpo okwu na-enweghị ihe ọ bụla hassle na ọ dịghị mkpa elele gị akpa akwa, so here we presented you with another great point of train travel versus plane travel, ebe ụgbọ okporo ígwè njem enweta nkwanye!
Train njem vesos ụgbọelu njem, Speed ​​- ngwa ngwa n'ụlọ n'ụlọ
Air njem a maara na-otu nke kasị ụzọ ruo gị ebe, Otú ọ dị, Nke a bụ nanị na-ewere na ụgbọ elu na ya echiche. Olee otú tupu nke ụgbọ elu gị na-eme ị na-abata ịgafe ogologo ego-na na obi iru ala akara? Ọ bụrụ n'ịlele akpa ị ga-eche nakọtara nke a mgbe ị batara - na-eri oge a. N'adịghị ka ọdụ ụgbọelu, na n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè e nweghị ego-ins ma ọ bụ nche edoghi, otú ị na-adịghị na-na ebe awa tupu gị njem. kasị isi n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-emi odude ziri ezi obi nke obodo ha na-ejere. Ukwuu n'ime mgbe ị na-ụgbọ okporo, ị na-abata kpọmkwem na ị na-aga. Otú ọ dị, site na iji ugbo elu, ị pụrụ iji ọtụtụ awa na-na na si n'ọdụ ụgbọ.
Ke akpatre afọ iri, ụgbọ okporo ígwè eme njem na-esiwanye mara mma na budget-conscious travelers. Ọ bụ ezie na na-ewere a ụgbọelu na ị na-aga bụ ụzọ dị irè isi na-eru gị ebe, e nwere mmezi akwụ ụgwọ na anyị a na-eleghara na-gaa na akaụntụ. Mgbe atụle gị mode nke njem, ị ga-ịgbakwunye na mmezi-eri nke na-na na si n'ọdụ ụgbọ. Nke a ma na-agụnye ndị na-eri nke manu na-adọba ụgbọala, ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ bọs ma ọ bụ taxi ụgbọ. Ọ dịghị nke bụ ọnụ ala.
Munich na Potsdam Ụgbọ oloko
Hamburg na Potsdam Ụgbọ oloko
Frankfurt ka Potsdam Ụgbọ oloko
Ọ bụrụ na ị kwụrụ maka azụmahịa na klas, gị ohere a na-emekarị nanị na ihe ụgbọelu oche. On a ụgbọ okporo ígwè, i nwere ike ịkwaga ebe ọzọ kpamkpam, na ị ga-enwe ihe legroom gburugburu gị oche. Mgbe gị na ụgbọ elu, ị ga-eche maka oche belt ịrịba ama agbanyụ ịkwaga si oche gị. Otú ọ dị, na a ụgbọ okporo ígwè na ị na-akpali ala aisles, nwụchiri a ụfụ ma ọ bụ kọfị, na ikiri ụwa n’aga. A sinik ụgbọ okporo ígwè pụrụ ọbụna ịbụ a ezumike. Most European trains also offer free WiFi – something which cannot be yet said for all ụgbọ elu.
Train njem-enye gị ohere ịga comfortably na gị adored Pita. ọtụtụ anu ulo na-adịghị ruru eru ka ikuku njem n'ihi ahụ ike, afọ, ma ọ bụ izu.
njem na European ụgbọ oloko nwere ike buru nkịta, nwamba, na ndị ọzọ na obere anụmanụ ha na ọtụtụ oge na-akwụghị ụgwọ!
Inweta ihe ndị a niile echiche, ọ dị mfe ịhụ otú ụgbọ okporo ígwè eme njem na-aghọ esiwanye kpagburuibe taa. Ụgbọ elu na-adaba adaba ka i mba kilomita. Otú ọ dị, if you are traveling around Europe or other areas with excellent rail transportation, ụgbọ okporo ígwè eme njem bụ ihe oru oma na ala mode nke iga.
Ya mere ugbu a na anyị kwubiri na-eto eto na ụgbọ okporo ígwè njem vesos ụgbọelu njem, Iji chọta kacha mma ụgbọ okporo ígwè n'ego ụgbọ na Europe, nleta Save A Train.
Maka ozi ọzọ, Soro Save A Train on Facebook, Instagram Account, na Twitter Accounts.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-versus-plane-travel%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / pl na / nl ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.